Sport - ewa.mg
Nibata ny amboaran’ny anarana tompondaka fahefatra amby telopolo tany Espana, na ny Liga amin’ny taranja baolina kitra ny ekipan’ny Real Madrid. Fandresena tamin’ny isa 2 noho 1 nanoloana ny Villareal, afak’ omaly alina, niaraka tamin’ny faharesen’ny Barcelone tao antaniny 1 noho 2 teo anoloanan’ ny Ossasuna, no niverenan’ny amboara teo am-pelantanan’ny klioba tarihin’ilay mpanazatra frantsay, Zinedine Zidane. Isa 86, taorian’ireo andro 37 tontosa, no nahavoahosotra ny Real de Mardrid ho tompondaka. Tsy hisy fiantraikany amin’ ny filaharana intsony ny andro faha-38 farany amin’ny Liga. Hijanona eo amin’ny laharahana faharoa kosa ny Barcelone. Natsimbadiky ny Real Madrid tanteraka ny rasa tamin’ity fifaninanana Liga ity, na dia tara isa roa taorian’ny Barcelone aza izy ireo, talohan’ny fiatoan’ny fifaninanana tany Espana. Fandresena hatrany no azon-dry Sergio Ramos, vodilaharana sady kapitenin’ny Real de Madrid, tamin’ireo lalao folo nataony, taorian’ny fiverenan’ny Liga. Isan’ireo mpilalao angady nananana sy vy nahitana an’izao fahombiazan’ny Real Madrid izao ilay mpanafika frantsay, Karim Benzema. Mbola hiatrika ny lalao miverina amin’ny ampahavalondalana amin’ny fiadiana ny amboaran’i Eoropa isan-tarika ny “Trano fotsy”, izay hihaonany amin’ny Manchester City sy hanonerany ny fahareseny 1 noho 2 tao an-taniny, nanoloana an’ity klioba Anglisy ity. L’article Kitra espaniola :: Voahosotra ho tompondakan’ny Liga ny Real Madrid est apparu en premier sur AoRaha.
Tsy nanadino ireo ligim-pa­ritra miisa 22 mpikambana ao aminy ireo komity mpitantana eo anivon’ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF), manoloana izao valanaretina Co­vid-19 izao. Ho fiatrehana ny hamehana ara-pahasalamana amin’izao fotoana izao, nanao tsipaipaika izy ireo niaraka amin’ireo orinasa mpiara-miasa ka nahafahana nividy sakafo sy fanafody ho azy ireo, mitentina 25 tapitrisa Ar. Nitarika ireo komity mpitantana ary nanolotra izany, tetsy Mahamasina, omaly, ny filoha lefitra, Andriamanampisoa Al­fred. Vary, “gel disinfectant”, me­naka ary savony sy arovava no hita ao anatin’ireo entana no­mena ny ligy. Notsiahivin’ny mpanolotra fa manana andraikitra goavana eo anivon’ny baolina kitra eto Madagasikara izy ireo ka nahatsapany fa misy adidy amin’ireo ligy sy ny seksiona ary ireo mpitia baolina manerana ny Nosy. Alefa amin’ny alalan’ny Pao­si­tra malagasy ireo tohana ireo ka anjaran’ny ligy isanisany ny mizara izany. Nisy ihany ireo filohan’ny ligy tonga teny an-toerana, toy ny avy any Amoron’i Mania, Atsimo Andrefana, i Menabe ary Analamanga. Nisolo tena ireo ligy 22 nitondra ny teny fi­sa­orana Rakotoarimanana He­nin­tsoa, filohan’ny ligin’An­a­la­manga, ka nampahatsiahy fa to­kony hisy ihany koa ny tohana avy amin’ilay vola fanampiana tany amin’ny federasiona iraisam-pirenena (Fifa). Mikasika izay indrindra, nilaza Andriamanampisoa Al­fred fa mbola miandry ny anjaran’i Madagasikara fa tsy mbola navoakan’ny Fifa. Miezaka ny komity mpitantana ny hanao ny mangarahara, ahafantaran’ny va­hoaka malagasy izany. No­ha­raraotiny ihany koa ny niresaka ilay fanamian’ny Barea. “Tsy tao anaty fanapahan’ny komity mpitantana ilay izy. Aleo mba hatao anaty fifampidinihan’ny rehetra vao havoaka ny zavatra toy ireny satria mendrika ny hisalotra fanamiana tsara ny Barea izay nahavita zavatra tsara”, hoy izy.TompondakaL’article Kitra sy Covid-19 : nahazo tohana mitentina 25 tapritrisa Ar ny ligy 22 a été récupéré chez Newsmada.
Miasa hatrany i Nicolas Dupuis, na ao anatin’ny fanatanterahana ny fihibohana amin’ny ady atao amin’ny valanaretina coronavirus aza. Nambarany, ny faran’ny herinandro teo fa manana fikasana hanangona Barea miisa 20 any Frantsa ny tenany miaraka amin’ireo teknisianina efa niara-niasa taminy hatramin’izay. «Tsy maintsy tsinjovina dieny izao, ireo hisolo toerana ireo mpilalao efa nahazoazo taona», hoy izy. Na izany aza, tsy mbola voafaritra na efa nisy anarana nambarany fa vao eo am-piresahana amin’ireo olona any Frantsa izy, amin’izao fotoana izao.Efa nalaza tao anaty tambajotran-tserasera kosa nandritra ny andro vitsivitsy izay, ny amin’ireo mpilalao roa lahy izay voalaza fa manana ra malagasy dia i Kevin Theophile Catherine, izay milalao ao amin’ny Dynamo de Zagreb. 31 taona izy, ankehitriny ary vodilaharana no toerana misy azy. Araka ny fantatra efa manana traikefa amin’ny fiatrehana lalao lehibe maro izy, ka anisan’izany ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa «ligue des champions». Eo ihany koa i Loic Lapoussin, 24 taona ary mitana ny toeran’ny irakiraka.Ankoatra izay, efa mijery sy mandinika ny lalaon’ireo ekipa hifanandrina amin’ny Barea, eo amin’ny fifanintsanana ho an’ny “Can 2021?” sy ny “Mondial 2022”, i Nicolas Dupuis, amin’izao fotoana izao. Tsy nohadinoiny koa ny niresaka ilay Academie Elite des Barea, izay hanomanana ireo katitakely ho Barea rahatrizay. “Raha vao tapitra ity fihibohana ity ka resy tanteraka ny coronavirus, avy hatrany dia hitsirika ireo ankizy ho ao anatin’io Akademia io isika”, hoy izy.Farany, nanome fankaherezana ho an’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny “Orange pro league” ny tenany amin’ny ezaka efa natao sy vita ary ny mbola hatao.TompondakaL’article Nicolas Dupuis: mikasa hanangona Barea 20 any Frantsa a été récupéré chez Newsmada.
Niteraka fikorontanana eo amin’ny fandaharam-potoan’ny federasiona malagasy ny kung fu Wisa ny fisian’ny tsimokaretina Coronavirus eto Madagasikara, noho izao fihibohana izao. Vokatr’izany, hanatanteraka fivoriambe tsy ara-potoana mihitsy aloha izy ireo, rehefa vita ny fihibohana handaminana ny tetiandro. Tsiahivina fa efa nahitana ny fiadiana ny tompondaka nasionaly tamin’ny taon-dasa, saika noenjehina hatao ny 25 avrily teo kanefa izao tsy tontosa izao indray. Tsy maintsy mametraka tetiandro vaovao mihitsy, araka izany, ny federasiona.Araka ny fanazavana azo, mbola miato avokoa ny hetsika fanatanjahantena manerana ny Nosy, ho an’ny taranja kung fu Wisa. Efa nisy mihitsy ny taratasy fampitam-baovao mampiato izany nalefa isaky ny faritra eran’i Madagasikara, milaza fa tsy misy mahazo manatanteraka fifaninanana na ihany koa fanazarantena iraisana, ho fankatoavana ny fepetra apetraky ny fitondram-panjakana hisorohana ny fihanaky ny tsimokaretina Coronavirus eto amintsika. Mi.Raz L’article Kung fu Wisa: hanatanteraka fivoriambe aorian’ny fihibohana a été récupéré chez Newsmada.
Tompondakan’i Afrika – “Cross country”: hahemotra amin’ny 2021 ny fifaninanana
Tsy azo notontosaina, amin’ity taona 2020 ity, ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, eo amin’ny taranja “Cross country”, noho ny fisian’ilay valanaretina Coronavirus. Toy izany koa ny fiadiana ny tapakila hiatrehana ny “Lalao olympika” (JO 2021), hatao any Alzeria.Noho ny fisian’ny valanaretina Coronavirus, izay saika mahahenika ny firenena maneran-tany, voatery nahemotra avokoa ireo fifaninanana iraisam-pirenena, eo amin’ny fanatanjahantena. Voakasik’izany ny taranja atletisma, ho an’ny aty amin’ny kaontinanta afrikanina. Fifaninanana telo ny efa fantatra fa tsy azo tanterahina amin’ity taona 2020 ity ka hotontosaina amin’ny taona 2021.Voalohany amin’ireny ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, “Cross-country”, tokony ho notanterahina tatsy Lomé, Renivohitr’i Togo, ny 8 avrily lasa teo. Araka ny tapaky ny federasiona iraisam-pirenena (IAAF), hatao ny 5 marsa 2021 io fifaninanana io. Tsy miova ny firenena hampiantrano izany fa i Togo hatrany.Raha tsy misy ny fiovana, hisolo tena an’i Madagasikara amin’ity “Cross-country” ity i Mampitroatse, atletan’ny CosPN Boeny sy Ralisinirina Marthe, mpihazakazaka ao amin’ny 3FB Analamanga. Izy ireo mantsy no nandrombaka ny tompondakan’i Madagasikara, notanterahina tany Vakinankaratra, ny asabotsy 8 febroary lasa teo.“Na hihemotra aza ny fifaninanana, tsy tokony hisy fiovana ny olona hiatrika izany fa izy mianadahy ireo ihany satria fihemoran’ny fifaninanana io fa tsy hoe fanafoanana akory”, hoy i Johns, mpanazatra ny 3FB.Ankoatra izay, ny 26 ka hatramin’ny 29 mey ny hanatontosana ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, hatao any Alzeria. Io no hiadiana ny tapakila hiatrehana ny “Lalao Olympika” (JO 2021), tanterahina any Japon. Tsiahivina fa nihemotra ho amin’ny 23 jolay ka hatramin’ny 8 aogositra ihany koa izany fihaonana maneran-tany izany noho ny Coronavirus.Hotontosaina ny 20 marsa 2021 ihany koa ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, horaisin’i Bielorussie. TompondakaL’article Tompondakan’i Afrika – “Cross country”: hahemotra amin’ny 2021 ny fifaninanana a été récupéré chez Newsmada.
c 8 juillet 2019
Famintinana ny lalao nataon’ny Barea sy Kongo
Nandresy ny ekipan'ny Kongo ny Barea de Madagascar omaly rehefa vita ny fandakana ny Tir au but. 2 noho 2 no nisarahan'ny roa tonta tao aorian'ny 120 minitra. Niditra tamin'ny fandakana ny tir au but ary ny Barea sy ny Kongo, ka teo no nivoaka mpandresy ny Malagasy tamin'ny isa 4 - 2. Tafiakatra izany ny Barea de Madagascar ho an'ny dingana ampahefa-dalana. Miandry ny mpifanandrina aminy izy izao, iray amin'ny Ghana sy Tonizia izany. Misaotra Barea - Alefa Barea - Miara Mirona
c 1 juillet 2019
Ankafizo ny baolina roa matin'i Barea tamin'ny andro fahatelo ny vondrona B teo amin'ny CAN 2019. I Lalaina Nomenjanahary sy i Carolus Andrea no nampiditra ny baolina 2 an'i Barea an'i Madagasikara. Misaotra Barea. Alefa Barea. Miara mirona.
c 30 juin 2019
Nandresy an’i Nigeria 2 – 0 ny Barea – CAN 2019
Tafiakatra amin'ny dingan'ny ampahavalon-dalana ny Barea an'i Madagasikara rehefa avy nandresy an'i Nigeria tamin'ny isa 2 - 0. I Lalaina Nomenjanahary (Bolida) no nampiditra ny baolina voalohany tamin'ny faha 13 minitra nilalaovana. Nampian'i Charles Andriamanitsinoro (Carolus Andrea) ny isa tamin'ny minitra faha 53. Mitana ny laharana voalohany izany ny Barea an'i Madagasikara amin'ny isa 7 taorian'iny fandresena iny ao amin'ny vondrona B misy azy. Isaorana be dia be ny ekipantsika. Alefa Barea. Miara Mirona.